आपतको परिचय ~ जोगी जिन्दगी
8:05 PM छापा लेखन, संस्मरण No comments
भैंचालोले नेपालको जमिन जति हल्लिएको छ, उत्तिकै हल्लिएका छन् मान्छेका परिचय पनि । विपत्तिहरु मान्छेका परिचय निखारिने समय हुन् । यो विपदको बेलामा देखिएका मान्छेका केही सार असार परिचयहरु छन् जसले मलाई जीवनभर हल्लाइ रहने छ । मेरो गाउँका एकजना कार्की भाइको दम्पत्ति काठमाडौंमा पुरिएर दिवंगत भयो । देख्ने सुन्नेका अनुसार लोग्ने मात्रै भागेर आँगनमा आइसकेका थिए । श्रीमति निस्कन ढिला गरिन् र भित्रै अड्किइन् । भैंचालो गैरहेकै थियो । बाहिरबाट सामान्यपुरिएकी श्रीमतीलाई तान्न उनी भित्र पसे । ढोकासम्म घिसारेर ल्याए । तर त्यै बेला पुरै घर पल्टियो र दुबैको एक ज्यान एक प्राण एक मरण भयो । प्रेमको यो परिचय कमाउन मान्छेले कति जुनी लिनुपर्छ थाहा छैन । तर उनले एकै झल्कोमा त्यो देखाए । तिम्रो मृत्यु सार्थक भयो भाई । गोरखामा राहत वितरणका क्रममा मित्र केही पत्रकार र सर्जकमित्रले अर्को परिचय देख्यौं । पोखराको एक होलसेल पसलमा गोटाको ३६ सयका दरले भए जति पाल किन्यौं । पाल अपुग भएकोले बाटोका रिटेल पसलमा पनि किन्यौं । दुःखद कुरा के भने होलसेल पसलमा भन्दा बाटो साना खुद्रे पसलमा भाऊ कम थियो । समग्र मानवताले
उत्कृष्ट परिचय प्रदर्शनको माग गरेका बखत, राहतको बहानामा खाध्यान्न र त्रिपाल भित्र्याएर बेच्ने गिरोहहरु पक्राउ परिरहेको, गोदामबाट सामान बरामद गरिएका समाचारहरु पनि सुन्नमा आए पछि गएर । अमानवताको यस्तो निकृष्ट परिचय त कुनै पिचास वा राक्षसले पनि देखाएन होला । तिमीहरु जो जसले भुकम्पलाई कमाउने अवसर बनायौं जीवनभर त्यसैले पिडाले अशान्त बाँच्नेछौ भन्ने कुरामा मलाई कुनै शंका छैन । कसैले पनि राहत बाँडेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा नराखे राम्रो हुने हो । मेरो एकजना गाउँले भाइले एकल प्रयासमैं गोरखा मात्रै ४ पटक पुगेर राहत बाँडे । तर हरेकजसोका फोटा उनले फेसबुकमा राखे । ।।।दाई, मेरा फोटा हेरेर अरुको मनमा पनि जाँऊ जाँऊ होस् भनेर फोटो रोखको हुँ । गाली गरे गर्नोस् ! यत्ति बुझ्नोस् दाई, फोटो राख्ने मान्छेले पक्कै गाउँ पुगेर राहत बाँडेको छ । तर फोटो हालेको बिरोधमा स्टाटस लेख्ने चाँहि गयो कि गएन थाहा छैन ।’ मेरो ज्ञानले जवाफ दिन सकेन । म आफैंले ।।।फोटो हाल्नेहरुलाई अहम्को उकेरा लगाएका मान्छे’ भनेर फेसबुकमा स्टाटस लेखेको थिएँ । अहिले सोच्छु, विपतको बेलामा अहम्को कुरा कसैले नल्याएको भए ठिक हुन्थ्यो होला । भैंचालो गएको चौथो दिन सरकारको नेतृत्व र प्रशासनिक क्षमता भएन भनेर धेरैले प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए । मैले त्यस्तै सार्वजनिक प्रतिक्रिया जनाउँदा पोखराका एक कवि(?)ले अनावश्यक आक्रोश
जताए । भैंचालोको भोलीपल्ट देखि आजका दिनसम्म उद्दार, राहत र पुनस्थापनका काममा म जेनतेन सकेको खटिरहेको हुँ । म पुगेको ठाउँमा सरकार देखिन, मैले लेखेँ । तर सरकारकाअन्धभक्त उनले ।।।सरर कारमा बसेर पिकनिक मनाएर आएको’ भनेर अति निक्रिष्ट शब्दले गाली गरे । यो शब्द मलाई थिएन, स्वतस्फुर्त उद्दार र राहतमा खटेमा तमाम नेपालीहरु प्रति थियो । उनलाई जागिर र पदको जोहो गरेर जीवन सुधार्नु थियोआफ्नो पार्टीको सरकारको चाकरी गरे । मलाई थिएन गाली गरेँ । मलाई अधैर्य भए पछि तल्लै तहको शब्द प्रयोग गरेर सार्वजनिक रुपमैं उनको झ्याँको झार्न कोशिस गरे । विपदको यो घडीमा उद्दार र राहतको काम गर्न छोडेर काम गर्नेहरुलाई नै अर्ति दिने बुद्ध पुरुषदेखि सरकारलाई कालो झण्डा देखाउने महात्मासम्म यही बेला देखिए । सबैलाई गाली गर्दै हिड्नेफुर्सद थिएन गरिएन । मैले गोरखामा भुकम्पले परिवारको सदस्य गुमाएर पनि समान्य मान्छेझैं काम गरिरहेका मान्छेहरु देखेँ । नुवाकोटमा छोरी गुमाएकी बुढी आमाले भर्खर जन्मेकी पनातिनीलाई तेल लगाइरहेको देखेँ । भुकम्पमा पिता गुमाएको धादिङ्को युवालाई १३ दिन नपुग्दै घरको भग्नाबशेष पन्छाउँदै गरेको देखेँ । तिनीलाई पिडित भन्नै मन लागेन । वीर योद्धा हुन् यिनीहरु । रुन, कराउन वा दुःख देखाउन पनि मान्छेलाई फुर्सद चाहिन्छ । बिरामी हुन पनि फुर्सद चाहिन्छ । किरिया गर्न पनि
फुर्सद चाहिन्छ । यो समय ।।।अब भयो पुग्यो’ भन्ने समय होइन । साँझ बिहान फेसबुक र ट्विटरमा ।।।यसो गर उसोनगर’ भन्ने अर्ति र गाली राखेर मानवहुनुको दायित्व पुरा हुँदैन् । मान्छेको जीवन परिचय निर्माणको यात्रा हो । परिचय कहिल्यै निरपेक्ष निर्माण हुने कुरा होइन । परिचय भन्ने कुरा व्यक्ति, स्थान, घटना र समयको सापेक्ष हुन्छ । यिनैका दैलामा टेकेर मान्छेको परिचय उभिन्छ । संकटको समयमा, आफूलाई पर्दा होस या अरुलाई, मान्छेको परिचय निखारिएर आउँछ । मानवताको परिचय देखाउने यो भन्दा उपयुक्त अवसर अर्को छैन । समय, सम्पत्ति, सहभागिता र साथको सहयोग नगर्ने मान्छे मान्छे नै होइन । यस्तो विपत्मा पनि मन फुकाउन नसक्नेले आफूलाई सबैभन्दा स्वार्थी र अमानुष जनावर सम्झे हुन्छ ।